Salaan Maxamed Xirsi "Salaan Carrabey", (HJ, Adan Madoba)
Salaan wuxuu iibshey 50 awr, nimankii wadeyna inta uu sii jicsimay buu yidhi dib ugu laabta ooshii ay ka yimaaddeen isagiina wuxuu iska aadey Cadan. Nimankay xididka ahaayeen ariinkaas ma jeclaysan waxayna talo ku gaadheen in Salaan Carrabey loo dilo falka uu sameeyey.
Berigii hore waxaa caado ahaan jirtey in haddii la dilo nin Inan-Layaal ah laga dhiibi jirey 160 Halaad oo mag ah. !00 Halaad waxaa lahaa tolkiis, 60 Halaadna reerka uu ka qabo.
Shirqoolkaas waxaa lagu go'aansaday in ninkii Axmed Garaad ah ee arka Salaan uu dilo isla markaana Reer Dhooble (Salaan qoyskuu ka qabay) ay dhaafi doonaan 60 Halaad, 100 halaad ee magta ahana tolku qaybsado.
Salaan waa ka war helay ariinkaas oo markuu DIbadda ka soo laabtay wuxuu Ganacsi ka dhexfurtay Abtiyaalladii Bah-Ararsame. Muddo ka dib ayaa waxaa Salaan loo soo diray Maxamed DHooble oo seeddigii ahaa si uu u soo khiyaameyo. Salaan arrinkaas waa ku gartay seedigii wuxuuna geedkii shirka ee abtiyaaladii fadhiyeen ka tirshey tixdan gabayga ah. Waxaa loo sheegay Salaan in intii uu ka soo maqnaa ooridiisa uu soo doonay nin yidhi waxan ka dhiibayaa 50 halaad Salaanna gabaygiisa waa ku soo daray arrinkaas.